नरवणेको भ्रमण : चौतर्फी चासो – esetokhari.com
नरवणेको भ्रमण : चौतर्फी चासो
भ्रमणलाई काठमाडौं र दिल्लीमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । सीमा विवादको मामिलामा सेनाको अडान महत्वपूर्ण
२०७७ कार्तिक १९, बुधबार १७:१३
नेपालगन्ज : भारतीय स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे बुधबार दिउँसो काठमाडौं आएका छन् । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निम्तोमा उनी नेपाल आएका हुन् । भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे भारतीय वायु सेनाको विशेष विमान इन्डियन एयर फोर्स ३३ मार्फत काठमाडौं ओर्लिएका हुन् ।
उनको विमान ११ बजेर ४० मिनेट जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको स्वागतमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेका छन ।
भ्रमणदलमा नरवणेकी श्रीमतीसहित चार सदस्य रहेको छ। नेपाल र भारतबीच एकअर्को देशका सेनाप्रमुखलाई मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्जाबाट सम्मान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। त्यही परम्पराअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानसेनापति थापाले २०७५ पुस २९ मा नयाँदिल्लीमा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा ग्रहण गरेका थिए । यस्तो कार्यक्रम विगतमा सामान्य औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको थियो तर केही महिनादेखि नेपाल–भारत सीमालाई लिएर कायम विवाद र नरवणे आफैंले दिएको नेपालसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनको भ्रमणलाई काठमाडौं र दिल्लीमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
नेपाली सेनाले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको नरवणेको भ्रमण तालिकाका अनुसार काठमाडौंमा रहँदा रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट्ने कार्यक्रम छ । भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणको विरोध हुन सक्ने भन्दै चार वटै सुरक्षा निकायलाई विशेष रुपमा परिचालन गरिएको छ ।
उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल–भारत बीचको विगत ७० वर्षदेखिको परम्परालाई निरन्तरता दिनु नै हो । उनी भारतका २८औँ प्रधानसेनापति हुन् । वैशाख यता लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर नेपाल–भारतबीच निकै पेचिलो विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विवादमा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे समेत मुछिएका छन् ।
सीमांकन हुन बाँकी रहेको यस क्षेत्रलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि धेरैपटक पहल गरेको थियो, तर भारतले वास्ता नगरेपछि नेपालले पनि यो क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले ‘चीनको उक्साहट’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यस्तो प्रतिक्रिया दिने नरवणे नेपालको मानार्थ महारथीको दर्जा पाउन कसरी योग्य छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर, उनले यो प्रतिक्रिया सच्याइसकेको नेपाली सेना बताउँछ । नेपालको आधिकारिक नक्साभित्र भारतीय सेनाको ठूलो क्याम्प छ । जहाँका स्थानीय नेपालीहरू बन्धक छन् ।
जहाँ नेपाली राज्यको उपस्थितिलाई भारतीय सेनाले रोकिरहेको छ । त्यही सेनाका प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिँदा के सन्देश जाला भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ । नयाँ नक्सा प्रकरणपछि भारतबाट उच्चस्तरका अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको पहिलो पटक हो ।
यसअघि गत ५ कात्तिकमा भारतीय वायु सेनाको विशेष विमान चढेर काठमाडौं आएका ‘रअ’ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री तथा अन्य अधिकारीसँग अनौपचारिक परामर्श गरेका थिए । नेपाल भ्रमणका क्रममा नरवणेले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा प्रतिक्रिया दिन्छन् वा दिँदैनन् यदि दिए भने कस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने चासो धेरैको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भारतको गुप्तचरसंस्था ‘‘रअ’ का प्रमुखसँग पौने तीन घण्टा अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्तामा के के कुराकानी भयो भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । यसपटक भारतका प्रधानसेनापति नरवणेसँग प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भेटवार्ता हुँदैछ ।
सीमा विवादको मामिलामा सेनाले लिने अडान नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने विषयमा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । प्रमाणसहित तर्क पेस गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष दख्खल छ । प्रधानमन्त्रीको व्याक्तिगत क्षमताले पनि धेरै ठूलो अर्थ राख्छ ।
उदाहरणका लागि नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विषयमा विवाद हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर देशलाई ठूलो लाभ दिलाएका थिए । नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा सैन्य कूटनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै भूलेका छैनन् ।
तर, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले खुट्टा कमाउने हुन् कि ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । लिम्पियाधुराको नक्सा सहितको पाठ्यपुस्तक जारी गर्न ढिलाइ हुनु, प्रधानमन्त्रीद्वारा बडादसैंको अवसरमा शुभकामना दिने क्रममा प्रयोग भएको लोगोमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नसमेटिएको नक्सा समावेश हुनु लगायतका विषयले प्रधानमन्त्री ओली छली राष्ट्रवादको अभ्यासमा त छैनन् ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
यस्ता आशंका चिर्न प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला सफल हुन सक्नुपर्छ । यो भेट दुई देश बिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र समस्या समाधानको पथका रूपमा अघि बढ्न हुनसक्नुुपर्छ । विश्लेषकहरूले नरवणेको भ्रमणले राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
विशेषगरी शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र नरवणेबीच बालुवाटारमा हुने भेटवार्तालाई लिएर दिल्ली र काठमाडौं दुवैमा चासो राखिएको छ । गत वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढंगले चीनको मानसरोवर जोड्ने पिथौरागढ–लिपुलेक सडकखण्डको उद्घाटन गरेयता दुई देशबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीच घनिष्ट सम्बन्ध हिजोदेखि अहिलेसम्म रहेको छ ।
र, भविष्यमा पनि रहिरहने छ । यसर्थ यो भेटलाई दुईदेशको हित र तमाम समस्या समाधानका साथै नेपालका प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको छली राष्ट्रवादको आरोप पुष्टि गर्ने अवसरका रूपमा पनि देखिएको छ ।